မအောင်မြင်ခင်က ကားဝပ်ရှော့မှာ အလုပ်သမားဘဝကနေ စခဲ့တဲ့ အဆိုတော် မနောရဲ့ အောင်မြင်ခြင်း နည်းလမ်း – Sport Gaber
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ ယခုပြောပြပေးသွားမယ့် အကြောင်းအရာလေးကတော့ အောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့ အဆိုတော် မနော ရဲ့ လေးစားစရာ အကြောင်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မနော က သူ့ဘဝကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြံတွေ သူ့ရဲ့ page ကနေ မျှဝေလာခဲ့ပါတယ်။
မနော က အခုခေတ် လူငယ်တွေကို အချိန်ကို အကျိုးရှိအောင် အသုံးချတတ်ဖို့နဲ့ သူ့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကို ယခုလို ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ မနော က “၁. ကျွန်လို သည်းခံ ရမယ်။ ၂. သခင်လိုဖြစ်အောင် ရည်ရွယ်ချက် ပြင်းထန်ရမယ် ၃. မိမိဆရာထက် စောစောထရမယ် ဝေယျာဝစ္စပြုလုပ်ပြီး နောက်ကျမှအိပ်ရတယ်။
နောက်တော့ တရုတ်ပြည် ” ဝပြည်နယ် ” မှာ ဆေးသုတ်တဲ့အလုပ် လုပ်ကိုင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဟာ မနောဆီကို လာလည်ခဲ့တယ်။ လက်ဖက်ရည်သောက်ရအောင်ဆိုပြီး ဆိုင်ပြီး သူဘယ်လို ဝင်ငွေရတယ် ဘယ်လောက်အထိရတယ်ဆိုတာကို ပြောပြခဲ့တော့ မနောက အရမ်းအားကျခဲ့တယ်။ အဲ့ခေတ်က တစ်လ ၁၅၀၀ ပဲရသေးတာကိုး သူ့သူငယ်ချင်းက ၂သိန်းကျော်ရနေတော့ အားကျတာဟာ မဆန်းပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းက သူနဲ့အလုပ်လိုက်လုပ်ဖို့ခေါ်တယ်။ သူဆုံးဖြတ်ချက် ဝေဝါးနေခဲ့တယ်။ ဒါနဲ့ပဲ မနောဟာ သူ့ရဲ့မေမေ နဲ့တိုင်ပင်တော့” မေမေကခွင့်မပြုဘူး ငါ့သား မင်းကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ခွဲနိုင်တဲ့အချိန်မှ မင်းဆရာကိုခွင့်တောင်းပြီး ဆိုင်ခွဲပါတဲ့ ဆရာက ဆိုင်ခွဲဖို့ ခွင့်မပြုဘူးဆိုလျှင်တော့ မင်း’ဝ’ပြည်နယ်ကို ထွက်လုပ်ချင်လုပ်ပေါ့တဲ့ ခွင့်တောင်းရမှာမင်းအပိုင်း ခွင့်ပြုတာမပြုတာက ဆရာ့အပိုင်းတဲ့ ” ဆိုပြီးပြောခဲ့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ ဆရာကိုပြောဖို့လုပ်တိုင်း မပြောရဲ အမြဲလွဲနေခဲ့တာကြောင့် သူထွက်ပြေးခဲ့တယ်။ ဆရာက ခဏခဏပြန်ခေါ်တယ်။ သူ့အမေကပြန်ပို့ခဲ့တယ်။ သို့သော် ခဏခဏပြန်ထွက်ပြေးနေတော့ သူ့ဆရာကလည်း မင်းထိုက်နဲ့မင်းကံဆိုပြီး ထားလိုက်တော့တယ်။ သူ့အမေကလည်း မနော က အသက်ငယ်သေးတော့ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ အသိဖြစ်တဲ့ အန်တီဆု အကူအညီနဲ့ ဆရာဦးဇော်လွင် ဆန်းသစ်ရောင်ခြည် အမည်ရှိ ကားဘော်ဒီရုံကိုရောက်ခဲ့တယ်။
ဆရာကလည်း ဘယ်လောက်ထိတတ်လဲ စသဖြင့် အလုပ်နဲ့ပတ်သတ်တာတွေ မေးတယ်ပေါ့။ တိုက် ​မှောက် အကုန်ပြင်နိုင်ပြီဆိုတော့ ဆရာကလည်း တစ်လ ၄၅၀၀ ပေးတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူက ကြိုးစားရင်းနဲ့ လက်ထောက်နေရာ ရကာ တစ်လကို ၉ထောင် ပေးခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူကိုယ်တိုင် အလုပ်တွေကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီး လက်ခံနိုင်လာတယ်။ လက်ထောက်ဆိုတော့ ပညာကမသေးဘူးလေ။
နောက်တော့ သူက တပည့်တွေလည်းရကာ ဆရာကောင်းပီပီ နည်းနည်းယူ များများပေးရတယ်။ သူတို့ထက်လည်း အစောထ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဘာညာ စသဖြင့် ပြီးတော့မှ သူအားကိုးရတဲ့ တပည့်တွေကို နိုးပြီး အလုပ်ဆက်ကြတယ်ပေါ့။ ဒီနေရာမှာလည်း သူဟာ ညဘက်တွေဆို ၁၂ထိအလုပ်ဆင်းပြီး ပိုကြိုးစားကာ လေ့လာသင်ယူခဲ့ရတယ်။ ပညာတွေမြန်မြန် တတ်မြောက်ချင်တဲ့အတွက်ပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ပဲ သူက ဆရာဇော်လွင်ဆီမှာ ကားအသစ်တွေကို လုပ်တတ်လာခဲ့တယ်။ ဟိုင်းလပ် ဆန်နီ ပါဗလေကာ ဘန်စူပါရုကားနှင့်ဂျစ်ကား တွေကို ဆရာတွေရဲ့ ကျေးဇူးနဲ့ လုပ်တတ်လာခဲ့တယ်။ ဒါနဲ့ ပထမသင်ပေးခဲ့တဲ့ ဆရာဦးသိန်းဇော်ဆီက တိုက်ခံရတဲ့ကားတွေကို ဖြောင့်တတ်ခဲ့တယ်။ ကားအမိုးကိုင်းကပ်ခြံ ပညာလည်း ထပ်မံရခဲ့တယ်။ နောက်တော့ ကိုယ်တိုင် ကားမောင်းတတ်ခဲ့တယ်။
ဒါ့အပြင် ဆရာ့ဆီမှာ ပညာသင်ဆဲမှာပဲ သူ့ရဲ့မင်းသမီးနဲ့ အိမ်ထောင်ကျခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒီလိုနဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ မိဘဆရာကျေးဇူးများနဲ့ သူဟာ ဆရာဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ သူဟာ ဘာ့ကြောင့် ဒီလိုတွေ လုပ်နိုင်ထိ အောင်မြင်ခဲ့လည်းဆိုတာကို အချက် ၇ ချက်နဲ့ ပြောပြလာခဲ့တယ်။ ၁။အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားခြင်း(
အချိန်လုခဲ့ခြင်း) ၂။စာတွေတော်တော်လေးဖတ်တယ် ၃။မိဘ ဆရာသမားများရဲ့ အဆုံးအမ သြဝါဒကိုခံယူတယ်။
၄။မိမိရည်ရွယ်ချက်ကိုအပျက်မခံဘူး ၅။မိမိအလုပ်အပ်သူများကို လေးစားတန်ဖိုးထားတယ် ကတိတည်တယ် အရှုံးပေါ်လည်း မိမိလက်ခံထားသည့်အတိုင်း အပြီးထိဆက်လုပ်ပေးတယ် (ဒါဟာ တာဝန်ယူမှု စိတ်ဓာတ်အပြည့်အဝရှိပြီး ဆရာကောင်းပီသတာပါ) ၆။ရိုးသားပွင့်လင်းတယ် ပြုပြင်စရာများကိုအတိအကျအရှိအတိုင်းပြောတယ် (ဒါကလည်း သူများတွေလို ရပါတယ်ကွာဆိုပြီး လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး)
၇။ရက်ချိန်း တစ်လလုပ်ရမည့်ကားကို ရက်၂၀ ဝန်းကျင်နှင့်အပြီး နေ့ညကြိုးစားလုပ်ပေးတယ်။ ည (၂) နာရီဝန်းကျင်ထိ အချိန်ပို ဆင်းပေးခဲ့တယ်။ မပြည့်စုံသူတွေအတွက်တော့ အားလပ်ချိန်နဲ့ အနားယူချိန်ကိုတတ်နိုင်သမျှလျှော့ရမယ်ပေါ့ဗျာ ” ဆိုပြီး အဆိုတော် မနော ဟာ သူကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတွေကို ချစ်ပရိသတ်ကြီးထံ ပြန်လည်မျှဝေပေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုတော်မနော က အတွေ့အကြုံအရမ်းများတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါပဲ။
အချိန်ကို ဘယ်လိုအသုံးချပြီး ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတာကအစ ပြောပြပေးခဲ့တာပါ။ ဒါဟာ ကျနော်အတတ်နိုင်ဆုံး အတိုချုံးပြောပြပေးခဲ့တာပါ။ တကယ့်အရှည်ကတော့ မနောရဲ့ page မှာ သွားရောက်ဖတ်ရှု့နိုင်ပါတယ်ခဗျာ။ သူဟာ ကျနော်တို့ကို ဘယ်လိုစိတ်မျိုးထားရမယ် ဘယ်လိုကြိုးစားရမယ်ကအစ သင်ပေးလိုက်သလိုပါပဲ။ တကယ်ကို လေးစားအတုယူဖွယ်ပါနော်။
ချစ်ပရိသတ်ကြီလည်း ဒီစာလေးကို ဖတ်ရှု့ပြီး ကြိုက်နှစ်သက်ပါက share ပြီး မှတ်ချက်လေးတွေလည်း ရေးသားပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။ ပရိသတ်ကြီးအားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာကြပြီး သာယာပျော်ရွင်တဲ့ နေ့ရက်လေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
မကြာခင် Music Video ထွက်ရှိတော့မယ် ပုရိသတွေရဲ့ အသည်းကျော် မလေး Hillary Soe